Wafdi uu horkacayo gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya oo booqasho ku jooga Taliyaaniga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Rome – Mareeg.com: Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga ayadoo wafdiga Gudoomiyahana ay kusoo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha FIUMICINO Airport ee magaalada Rome mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Talyaaniga, Safiirka Soomaaliya ee dalkan iyo Jaalliyadda Soomaaliyeed.
Booqashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdigiisa ay ku joogaan dalkan Talyaaniga ayaa qaadan doonta mudo Shan cisho ah waxaana ay ka dambeysay kadib markii uu casuumad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Talyaaniga.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha FULIMICINO Airport ee magaalada Rome ayaa xusay in booqashada isaga iyo wafdigiisa ay ku joogaan dalkan Talyaaniga ay dhidibada u aasi doonto wadashaqeyn iyo iskaashi dhexmara Baarlamaannada Soomaaliya iyo Talyaaniga.
Maanta ayaa gudoomiyaha Baarlamaanka iyo wafdigiisa waxa ay kulammo la qaadan doonaan xildhibaanno ka kala socda xisbiyada dalkan, gudoomiyaha aqalka Senetka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka dalka Talyaaniga ayadoo sidoo kalena uu Gudoomiyaha booqon doono magaalooyin taariikhi ah oo ku yaala dalkan Talyaaniga oo ay ka mid tahay magaalada Napoli.
Heesta Maanta:Heestii Hayga goosan cawaad iga gacan saraysaa